ရိုဇလင်းသည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်းကျသော ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယာယီအမည် S/1986 U4အဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး Uranus XIII အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ၏ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ရိုဇလင်းသည် လုံးဝန်းသောပုံစံရှိပြီး မျက်နှာပြင်အရောင်မှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။
~16,000 km²[မှတ်စု 1]
~200,000 km³[မှတ်စု 1]
~2.5×10၁၇ kg[မှတ်စု 1]
~0.012 m/s²[မှတ်စု 1]
~0.031 km/s[မှတ်စု 1]
Smith, B. A. (1986-01-16). "Satellites of Uranus". IAU Circular 4164. Retrieved on 2011-11-01.
Planet and Satellite Names and Discoverers။ Gazetteer of Planetary Nomenclature။ USGS Astrogeology (July 21, 2006)။6August 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။